राष्ट्रियसभा निर्वाचन आज, कुन प्रदेशको मतदानस्थल कहाँ ? – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
राष्ट्रियसभा निर्वाचन आज, कुन प्रदेशको मतदानस्थल कहाँ ?
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति : ९ माघ २०७६, बिहीबार
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन लागेका १८ सिटका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउँदै बिहीबार बिहान १०–४ बजेसम्म मतदान हुने जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार, प्रत्येक प्रदेशको १ स्थानमा मतदानस्थल तोकिएको छ । प्रदेश १ का लागि विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृह, २ का लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र नारायण स्मृति भवन र वागमती प्रदेशका लागि ललितपुर महानगरपालिका–४ स्थित वडा समिति भवन मतदानस्थल तोकिएको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात् १९ सांसद्को पदावधि यही फागुन २० मा समाप्त हुँदैछ । तीमध्ये राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जनाको पनि समयावधि सकिन लागेकाले आज १८ सिटका लागि चुनाव हुँदैछ । प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन् ।
आयोगका अनुसार, कुल मतभार ५३ हजार ५ सय ८ रहेको छ । आयोगका अनुसार, निर्वाचनको केही घण्टामै मतपरिणाम सार्वजनिक हुनेछ ।
वुहानको सार्वजनिक यातायात बन्द, सरकारले गर्यो यस्तो अपिल